ဤအပိုင်း - ကံထူးရှင်ရောင်းဝယ်သူကို ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီအခါတော့ ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းလေးရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၁၀သန်းမြောက်ရောင်းဝယ်သူဟာ အင်ဒိုနီးရှားမှလာတာပါ: Yak Kheng ဟာ Pontianakကနေ ဂျာကာတာကို ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့တာပါ။ သူဟာ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပြီး၊ သူရတဲ့ဝင်ငွေဟာ သူ့မိသားစု၏ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ကို ကာမိရုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူပြောသလိုပဲ၊ ဂျာကာတာဟာ အရာအားလုံးကို ငွေတန်ဖိုးရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ် - ဒါကြောင့် သူဟာ အပိုဝင်ငွေရအောင် ကြံဆနေခဲ့ပါတယ်။
အချိန်ကိုက်လေးမှာပဲ၊ မစ္စတာ Kheng သတင်းမရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတစ်ဦးဟာ သူ့ကို Forex အကြောင်းပြောပြပြီး၊ ဒါဟာ အပိုဝင်ငွေရရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောပြဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မစ္စတာ Kheng ကို FBSမှာ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ အကြံပြုခဲ့ပြီး၊ ဒီလိုလုပ်ခိုင်းခဲ့တာဟာ ကံကောင်းမှုတွေဖြစ်လာစေမည်ဆိုတာ သူမသိခဲ့ပါဘူး!
မစ္စတာ Khengဟာ ၁၀သန်းမြောက် ရောင်းဝယ်သူဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ! FBS အဖွဲ့က သူ့ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင်မှ သူ့ကံကို သူမယုံနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ ထို့နောက်တော့ FBS အင်ဒိုနီးရှားအဖွဲ့နဲ့အတူ သူလိုချင်တဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုရွေးချယ်ရန် ဆူဇူကီးအရောင်းပြခန်းကို သွားခဲ့တဲ့အခါ၊ ဒါဟာ တကယ်ပဲဆိုတာ သူသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ကံကိုအောင်ပွဲခံရန် Suzuki Satria F150ကို ရွေးခဲ့ပါတယ်။
"FBSကို ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်"ဟု မစ္စတာ Khengကပြောခဲ့ပါတယ်၊ "FBSက ကတိပေးသမျှတွေဟာ တကယ်ပဲဆိုတာ ဒီဆုက သက်သေပြနေပါတယ်။ ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ကံကောင်းမှုတွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံလိုက်ပါ!" မစ္စတာ Kheng အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သူ့အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမှာလဲ ကံကောင်းပါစေဟု ဆုတောင်းပေးပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို ခုပဲစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ!